नेकपा विवाद : प्रधानमन्त्रीको राजीनामा प्रसंगमा तीन फरक धारणा, कुन बाटो बलशाली बन्ला ? « News24 : Premium News Channel
नेकपा विवाद : प्रधानमन्त्रीको राजीनामा प्रसंगमा तीन फरक धारणा, कुन बाटो बलशाली बन्ला ?
काठमाडौं, १७ असार । सत्तारुढ नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (नेकपा) भित्र विवाद चर्को बनेको छ । शीर्ष नेताहरुबीच नै शक्ति संघर्ष सुरु भएपछि अबको नेपाली राजनीतिक कसरी अगाडि बढ्छ भन्ने चासोको विषय बनेको छ ।
अध्यक्ष समेत रहेका प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको राजीनामा मागिएपछि पार्टीको आन्तरिक राजनीति जटिल मोडमा पुगेको विश्लेषण हुन थालेको छ । तर, योक्रममा तीन वटा धारणाहरु सार्वजनिक भएका छन् ।
एउटा पक्ष जुनसुकै हालतमा राजीनामा दिनुपर्ने पक्षमा छ भने अर्को पक्ष कुनै हालतमा राजीनामा आउन नहुने पक्षमा छ । सच्चिने प्रतिवद्धता खोज्नुपर्ने धारणा राख्ने नेताहरु पनि छन् ।
सत्तारुढ नेकपामा प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको राजीनामा मागिएको प्रसंगले तरंग ल्याएको छ । ठूलो दल भएका कारण नेपाली राजनीति नै यो वरिपरि घुम्ने गरेको छ ।
मंगलबार र बुधबार बसेको नेकपा स्थायी कमिटी बैठकमा अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल सहित वरिष्ठ नेताहरु झलनाथ खनाल, माधव नेपाल लगायतले प्रधानमन्त्री समेत रहेका अध्यक्ष ओलीको राजीनामा मागेपछि नेकपा जटिल मोडमा पुगेको छ । तर, यो क्रममा तीन वटा धारणा आएका छन् ।
पहिलो–ओलीको राजीनामा माग :
प्रधानमन्त्री ओली सरकार सञ्चालनमा असफल रहेकाले राजीनामाको विकल्प नभएको तर्क एकथरि नेताहरुले गरेका छन् । यसमा अध्यक्ष दाहाल सहित खनाल, नेपाल उपाध्यक्ष वामदेव गौतम लगायत बलियो रुपमा उभिएका छन् ।
ओलीले आत्मालोचना सहित सच्चिने प्रतिवद्धता जनाउनुपर्ने र आगामी दिनमा पार्टीलाई एकतावद्ध बनाएर लैजान गम्भीर बन्नुपर्ने धारणा पनि आएका छन् । यसमा रामबहादुर थापा सहित लेखराज भट्ट, योगेश भट्टराई लगायतका नेताहरु रहेका छन् ।
तेस्रो–ओलीको दुबै पदबाट राजीनामा आउन नहुने :
पार्टी एकताले पूर्णता नपाएको यो बेला प्रधानमन्त्री एवं पार्टी अध्यक्ष ओलीले कुनै हालतमा दुबै पद छाड्न नहुने धारणा राख्नेहरु पनि छन् । ओली निकट मानिएका नेताहरु यो ‘लाइन’मा रहेका छन् । ओली निकट रहेका नेताहरुले बिहीबारबाट मात्र आफ्नो धारणा राख्ने छन् ।
हालसम्म २२ जनाले बोलिसकेको स्थायी कमिटीमा अधिकांशले प्रधानमन्त्रीको राजीनामा नै मागेका छन् । योबीचमा गुटगत छलफल र भेलाहरु निरन्तर चलिरहेका छन् ।
कुन गुटमा को ?
केपी शर्मा ओली पक्ष : ईश्वर पोखरेल, विष्णु पौडेल, सुवासचन्द्र नेम्वाङ, प्रदीप ज्ञवाली, विष्णु रिमाल, पृथ्वी सुब्बा गुरुङ, शंकर पोखरेल, छविलाल विश्वकर्मा, सत्यनारायण मण्डल, रघुवीर महासेठ, किरण गुरुङ
प्रचण्ड पक्ष : नारायणकाजी श्रेष्ठ, रामबहादुर थाप, गिरिराजमणि पोखरेल, वर्षमान पुन, टोपबहादुर रायमाझी, जनार्दन शर्मा, पम्फा भुषाल, देव गुरुङ, हरिबोल गजुरेल, गणेश शाह, देवेन्द्र पौडेल, मातृका यादव, मणि थापा, लीलामणि पौडेल, लेखराज भट्ट, चक्रपाणि खनाल र शक्ति बस्नेत
माधव नेपाल पक्ष : झलनाथ खनाल, बामदेव गौतम, भीम रावल, अष्टलक्ष्मी शाक्य, युवराज ज्ञवाली, रघुजी पन्त, बेदुराम भुषाल, घनश्याम भुषाल, भीम आचार्य, गोकर्ण विष्ट, योगेश भट्टराई, सुरेन्द्र पाण्डे र मुकुन्द न्यौपाने
यी बाहेक सभामुख भएकाले अग्नि सापकोटाको र गण्डकी प्रदेशको प्रदेश प्रमुख भएकाले अमिक शेरचनको पार्टी सदस्यता स्थगित छ । आमन्त्रित सदस्यहरु अमृत बोहरा र पेशल खतिवडा छन् । स्थायी कमिटी बैठकले विवाद बढाउने वा सहमतिमा लैजाने निर्णय गर्नेनै छ ।